Dad dhaqan aad u xun ku bilaabay Soomaalidu Turkiga ku nool!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Dad dhaqan aad u xun ku bilaabay Soomaalidu Turkiga ku nool!!
Dad dhaqan aad u xun ku bilaabay Soomaalidu Turkiga ku nool!!
(Ankara) 16 Agoosto 2019 – Dhaliyarada Afka Turkiga baratay, ee ku nool dalkan Turkigu, waxa ay dadka yimaadda u gaystaan tacaddiyo aan lasoo koobi karin. Tusaale ahaan, Dhakhaatiirta inta ay heshis la galaan ayay dadka dul saaraan lacag, lacagtaas oo aad u badan marka loo eego dadka danyarta ah ee halkan caafimaadka usoo raadsada. Kudarso oo, qofkaasi lacag turjubaannimo ah na wuu ka qaaday.
Sida oo kale, 2018 kii, mar aan aabbahay Istanbul xaalad caafimaad u keenay, waxa aan arkay dhawr qof oo ay lacago badan dul saareen iyaga oo tii turjumaan ka na ka qaadaya! Intaas uun kuma eeka e, dadku wax kasta oo ay u baahdaan in laga caawiyo, lacago ayay ka dhacaan. Tusaale ahaan, dadka guryaha kiraysanaaya ee magaalada ku cusub!
Hadda ba, waxa yaab igu dilay, qof Soomaali ah, walaalkaa ah, dalshisheeye jooga oo adiga caawimaad kaaga baahday, xanuusanaaya, sidee ayaad xoolihiisa u hungurayn kartaa? Aaway damiirkii walaalnimo iyo kii tolnimo. Wada dhalashadii Soomaalinimo maxaa ku dhacay?
FG: Dad badan oo wanaagsani waa ay jiraan, laakiin sidan ayay u badan yihiin
Waxaa Qoray: Naciimo Abwaan Qorane
Previous articleDagaalka Yaman oo yeeshay wejiga dagaalladii Somalia (Maxaa soo kordhay?)
Next articleSawir qaadihii Ciidamada Xoogga oo ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii Awdheegle + Sawirro